Wholesale CCTREE Yakakwira mhando 3d HIPS filament 1.75MM / 2.85MM 1kg 3d purinda filament CCTREE
CCTREE Yakakwira Hunhu 3d HIPI filament 1.75MM / 2.85MM 1kg 3d printer filament 1 KG HIPS 3d Plastic filament Yakaderera c, kunhuhwirira kushoma pane ABS
MAHIPI akakwirisa polystyrene. Polystyrene (PS) inogadzira anonhuwirira ehydrocarbon polymer akagadzirwa kubva kune monomer styrene, Polystyrene inogona kunge yakasimba kana kupupa furo. General-chinangwa polystyrene yakajeka, yakaoma, uye pane brittle. HIPS filament inogona kushanda zvakasiyana kana sechinhu chekutsigira, iyo inogadzikana mune limonene uye yakanaka mutambo neABS.
ZVIHURE Filament Sumo
CCTREE HIPS Filament Main Zvimiro
1. Soluble kune limonene. inogona kuve yekutsigira zvinhu zviviri zvakapatsanurwa-zvakashongedzerwa 3D purinda, inogona kushandiswa kutsigira zvinhu zvine mukati mezvikanda, zvikamu zvakaoma, zvakapetana zvikamu.
2. Shanda wakasiyana kupurinda, zvakafanana neABS.
3. Sekutsigira zvinhu uye mutambo wakanaka neABS, PETG.
4. Wide renji tembiricha kubva ku230 ℃ ~ 250 ℃: Inokodzera yakasungirirwa 3D printa, Makerbot, UP, Luzbot, Leapfrog, Reprap, Ultimaker, Mendel, Prusa, Raise3D uye nezvimwe.
5. Hapana hwema, HIPS zvakafanana michina zvimiro neABS mune kuti ine simba shoma, yakati siyanei, uye inogona kuiswa jecha.
6. HIPS inogadzikana muLimonene, inogona kuve yekutsigira zvinhu zviviri zvakapatsanurwa-yakashongedzerwa 3D purinda, inogona kushandiswa kutsigira zvinhu zvine matanda emukati, zvikamu zvakaoma, zvakapetana zvikamu
7. MAHURE ane kashoma kemhando kwekuruka panguva yekudhinda uye yakanakira kupenda ichiita kuti ive yakakurumbira kushandiswa nemapfekero, mamodheru.
8. Mutengo wakaderera, hwema hushoma pane ABS, Ruvara rweMatte, inoita kuti ive chinhu chinokwezva chekukurumidza kuratidzira.
Pashure: CCTREE 3D Printer PLA Filament Gradient Chiedza Ruvara (PLA Muraraungu)
Zvadaro: CCTREE fekitori akasiyana MAX-PLA (PLA +++) 3D purinda filament neyakajairwa, maindasitiri giredhi PLA
Hips Filament, Kudhinda NeHips